XOG: Fahad Yaasiin oo bilaabay ololaha doorashada Farmaajo & raadinta dhaqaalihii ku bixi lahaa | SMC
Home WARARKA MAANTA XOG: Fahad Yaasiin oo bilaabay ololaha doorashada Farmaajo & raadinta dhaqaalihii ku...
Taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji maalmo ka hor dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ka dib todobaad uu ku sugnaa magaalada Ankara ee dalka Turkiga, Sidoo kale, Taliyaha wuxuu horay u soo maray Addis Ababa, halkaasoo kula kulmay Taliyeyaasha Sirdoonada Itoobiya iyo Eritrea.
Ololaha doorashada Soomaaliya waxaa uu todobaadyadii u dambeeyay xooggiisa ka socday dibadda, gaar ahaan dalalka deriska, Imaaraadka, Turkey iyo Qatar.
Sidoo kale Fahad waxaa todobaadyadii ka sii horreeyay tagay magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo todobaad soo joogay, inta badan safaradan arrimaha doorashada ayay salka ku hayeen.
Dalalka Qatar, Iyo Turkiga oo dhinac ah iyo Imaaraadka Carabta ayaa sanadkan ku loolamaya doorashada, waxaana sida xogta lagu helay ay noqoneysaa doorashadii ugu lacagta badneyd abid soo marta Soomaaliya.
Dhanka kale, Magaalada Nairobi, waxaa ka socda olole xooggan oo ay wadaan siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan hoggaanka Xisbiyada dalka, waxaana magaalada dib ugu laabtay madaxweynihii hor ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo C/raxmaan C/shakuur Warsame oo labada muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Dubia.
Marka loo eego dhaq dhaqaaqyada siyaasadeed iyo ololaha safar ee ay galeen Fahad oo gadaal ka taagan Farmaajo, Kheyre, AAW iyo Shariif waxaa moodaa in Ololahooda yahay mid xooggan oo Saldhig dibadeed leh.
Previous articleThe new Somali Minister of Justice thanks Turkey for its contribution to his education
Next articleGolaha Wasiirada Soomaaliya oo la ansixiyay